मोफसल प्रचार प्रसारको लागि चितवनमा 'बादशाह जुट' – Namaste Filmy
असोज १७ – कार्तिक १५ गतेबाट देशभर एक साथ प्रदर्शन आउने तयारीमा रहेको चलचित्र ‘बादशाह जुट’ ले मोफसल टुर गरेको छ । प्रदर्शन मिती नजिकिदै गर्दा चलचित्र युनिटले मोफसल प्रचार प्रसार गरेको हो ।
प्रचार प्रसारको लागि चलचित्र युनिट आज (शुक्रबार) चितवन आईपुगेको छ । चितवनको भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्माता हर्क बहादुर कुँवरले चलचित्रमा बादशाह बन्न चाहने दुई युवाको कथा रहेको बताए । ‘बादशाहको अर्थ के हो ? बादशाह बन्न कस्तो संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चलचित्रमा रहेको छ’, उनले भने ।’ यस्तै उनले देशको राजनीति देखी हरेक कुराबाट दिक्क भएका नेपालीहरुलाई चलचित्रले एकैछिन भए पनि मनोरन्जन दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
निर्देशक जोनी सिंह रानाले प्रहरी र पत्रकारको कथालाई समेटेर चलचित्र तयार पारीएको बताए । उनले देशको लागि केही गर्न खोज्ने पत्रकार र प्रहरी नै कथाको केन्द्र बिन्दु भएको बताए । चलचित्रमा आतंकबादी आक्रमणको कथा पनि छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा रानाले त्यो दृश्यलाई देखाउन खोजिए पनि पूर्ण रुपमा नै कथा त्यसैमा आधारित भने नभएको जानकारी दिए । चलचित्रमा कथा पनि उनको नै रहेको छ । रानाको यो डेब्यु निर्देशन पनि हो । पहिलो पटक निर्देशनमा हात हालेको पनि चलचित्र हेरेर प्रतिकृया दिन उनले आग्रह गरे ।
यस्तै नायक सुशिल श्रेष्ठले अन्य चलचित्रमा भन्दा ‘बादशाह जुट’ मा फरक भूमिकामा काम गर्ने अवसर पाएको बताए । उनले अगाडिको चलचित्रहरुमा भन्दा यसमा आफुलाई पनि फरक देखाउन परेकोले कडा मेहेनत गर्नु परेको बताए । बादशाह बन्नका लागि फरक पेशामा रहेका दुई युवाले गरेको संघर्षको कथा नै ‘बादशाह’ जुट भएको उनले बताए ।
अभिनेत्री केइशा रावतले चलचित्रमा आफुले बादशाह बन्न चाहने युवाहरुलाई सहयोग गर्ने पात्रको भूमिका निर्वाह गरेको बताईन् । हाल भारतको मुम्बईमा बस्दै आईरहेकी रावतले नेपाली फिल्ममा काम गर्ने अवसर पाउनु नै ठुलो कुरा भएको बताईन् । स्क्रिप्ट मन परेको कारण नै चलचित्रमा काम गरेको रावतको भनाई थियो । चलचित्रकी अर्की अभिनेत्री रश्मी पाण्डेले भने आफ्नो भूमिकाबारे खास्सै खुलाउन चाहिनन् । पाण्डेले ‘बादशाह जुट’ राम्रो चलचित्र बनेकोले एक पटक हेरेर प्रतिकृया दिन आग्रह गरिन् ।
चलचित्र युनिटले आजै साँझ नारायणी नदी किनार नारायणगढमा कन्सर्ट समेत गरेको छ । दार्जिलिङको चर्चित तथा लेजेन्ड्री रक ब्याण्ड ‘मन्त्र ब्याण्ड’ को साथमा चलचित्र युनिटले कन्सर्ट गरेको हो । त्यस अघी आज बिहान नै हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन समेत आयोजना गरिएको थियो ।
एच एण्ड बि फिल्मस् प्रा.लि.र गोल्डेन ग्रेप्स फिल्मस् एण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.को संयुक्त व्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा सुशिल र आमिर, केइशा र रश्मीको अलावा आमिर गौतम, रोबिन तामाङ, रोशी खड्का, कमलमणी नेपाल आदिको मुख्य अभिनय रहेको छ । ‘काफल पाक्यो’ बोलको गीतमा ठुम्का लगाएकी अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको भने चलचित्रमा बिशेष भूमिका मात्र रहेको छ । उत्तम हुमागाईको सिनेमाटोग्राफी रहेको चलचित्रमा दिर्घ खड्काको सम्पादन रहेको छ ।
पबित्रा गुरुङको स्वरमा ‘दिलको चोट’ सार्वजनिक (भिडियो)
यस्तॊ छ नेपाली सेलिब्रेटीको दशैं